Japàna Afaka Idirana: Torohay Momba Ny Fivahinianana Any Japana Ho An’ny Olona Manana Fahasembanana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Desambra 2016 12:45 GMT
Vakio amin'ny teny Türkçe, Ελληνικά, Español, Italiano, Português, English
Tempolin'i Chion ao Amanohashidate, Kyoto, Japana. Tsy misy firy na tena tsy misy torohay amin'ny teny Anglisy ety anaty aterineto momba ny fivezivezen'ny olona manana kilema, ary voalaza fa ny trano fandraisambahiny any Japana dia tsy manamora ny famandrihana an-tserasera ny efitrano natokana ho an'ny olona manana kilema, fa ilàna antso an-taroby lava. Sary avy amin'i Nevin Thompson.
Noho ny fiakaran'ny fizahantany mankao anatiny ho 30 isanjato isantaona nanomboka ny 2011 hatramin'ny 2015, nametraka tanjona goavana mba hisarihana mpitsidika vahiny maherin'ny 40 tapitrisa hatramin'ny 2020 rehefa hatao any Tokyo ny lalao Olaimpika, ary 60 tapitrisa hatramin'ny 2030.
Ny fanamoràna ny fepetra amin'ny fahazoandàlan'ireo mpitsidika avy any amin'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Shina ny ampahany nahatonga ny firongatry ny fizahan-tany tato anatin'ny taona vitsivitsy, izay manome ny hany loharano goavan'ny mpitsidika mpizahatany any Japana. Mpitsidika avy any amin'ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao ihany koa no voasarika ho any Japana noho ny dokambarotra sy fanentanana fetsifetsy natao mba hanazava ny fivahinianana ao amin'ny firenena izay, noho ny torohay voafetra, amin'ny teny Anglisy sy ny fiteny hafa, dia mety ho sarotra ny mahazo azy.
Na izany aza, mbola somary ao anatin'ny haizina ihany ny vondrom-piarahamonina iray raha vao fivahinianana ho any Japana no resahana. Ho an'ny mpizahatany manana kilema nefa tokony ho any Japana, tsy misy firy na tena tsy misy torohay amin'ny teny anglisy ao amin'ny aterineto momba ny fahafahana miditra any amin'ny ankamaroan'ny valan-javaboahary tena fanaovana fizahantany, noho ny voalaza fa zara raha manisy efitrano voatokana ho an'ireo manana kilema afaka fandrihana amin'ny aterineto ny trano fandraisambahiny any Japana.
Mikendry ny hameno ny torohay banga ny Accessibility Japan. Manome torohay amin'ny teny Anglisy momba ny trano fandraisambahiny sy ireo toerana manintona manerana an'i Japana ilay tranonkala, ary koa ny vaovao farany momba ny fahafahan'ny olona manana kilema miditra amin'ireny. Atolotr'ilay tranonkala ireo fanazavana momba ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny fahafahan'ny olona manana kilema miditra amin'ny fiarandalamby Japoney sy ny fitsipika mifehy ny alika mpitaridalana any Japana, amin'ny fanontaniana mahazatra mety hapetraky ny mpizahatany, toy ny fanontaniana momba ny fidirana amin'ny aterineto any Japana, ary ny fomba fiteny Japoney tsotra ho an'ny mpitsidika.
Manasongadina sary tsara tarehy ny tranonkala, ary koa fijerena ny fahafahan'ny olona manan-kilema miditra amin'ny maro amin'ireo toerana malaza indrindra any Japana, toy ny Tempolin'i Kiyomizu any Kyoto, renivohitry ny Fanjakan'i Japana taloha:
“Kiyomizu-dera ao #Kyoto, fijerena indray ny fahafahana miditra amin'ny seza misy kodiarana – Japana afaka idirana
— Japana Afaka Idirana (@AccessibleJapan) 1 Desambra 2016
Noforonin'i Josh Grisade, monina any Japana; izay mamaritra ny tenany ho “tovolahy manana fahasembanana ara-tsaina eo ambony seza misy kodiarana mandeha amin'ny herinaratra ary monina ao Japana” ny tranonkala Accessible Japan.
Hoy Grisdale ao amin'ny tranonkala:
“Raha mijery an'ity tranonkala ity ianao, dia toa manana zavatra iraisana isika – ny fahasembanana. Nateraky ny fitambaran'ny traikefa tsara sy ny ratsy amin'ny fandehanana amin'ny seza misy kodiarana ny Accessible Japan. Manana traikefa be momba ny seza misy kodiarana mandeha amin'ny herinaratra ny mpamorona. Mpiriorio / Mpianjoria ao am-pony, hàlany ny mandre ny teny hoe “tsy azo atao” ary nanandrana nandroso tsy nisalasala… nefa olona mitaintaina ao am-pony ary tia manangona vaovao betsaka momba ny maha-olona aloha raha mbola azo atao.
Miseho aminà vilaogy Fiainana any Japana izay manadihady ny fahafahana miditra amin'ny tambajotran'ny fitateram-bahoaka any Japana i Grisdale.
Miasa ho toy ny fihaonan'ny fiarahamonina sy toerana iray hianarana sy fifanakalozan-kevitra momba ny andraikitry ny olona manana fahasembanana any Japana ihany koa ny Accessible Japan.
“Mpanakanto manana fahasembanana avy any Osaka no mikendry hitondra seza misy kodiarana mandihy amin'ny sehatra iraisam-pirenena | The Japan Times
Misy ihany koa resadresaka momba ny olana toy ny fanafihana amin'ny antsy tamin'ny Jona 2016 an'ireo mponina ao aminà trano fitaizana be antitra any amin'ny manodidina an'i Tokyo, izay nahafatesana olona sembana 19 ary naharatrana olona 26, ary ny fahasarotana faran'izay tafahoatra amin'ny fidirana ao amin'ny tranoben'ny Diet-pirenena (mpanao lalàna) dia:
— Michey Peckitt マイケル (@Peckitt) 25 Novambra 2016
@AccessibleJapan trano fitsaboana Sagamihara tsy nahavita nizara vaovao talohan'ilay famonoana: takelaka https://t.co/lghMX965nG
— Accessible Japan (@AccessibleJapan) 22 Novambra 2016
Ny fahorian'ny manana fahasembanana hiditra ny Diet Japoney
Manome fahalalana momba ny fiainan'ireo Japoney miaina miaraka amin'ny fahasembanana koa ilay bilaogy, tahaka ity tafatafa amin'ny teny anglisy ity, niarahana tamin'ny Yuriko Oda, filohan'ny PADM Japana (fikambanan'ny marary manana olana ara-pahitana), fikambanana izay manana ny fantsona YouTube azy manokana, Wheelchair Walker.
Mitady fanampim-baovao mandrakariva mba ho zaraina amin'ny mpamaky azy ny Accessible Japan, ary mavitrika mitady hatrany olona izay manana fahasembananana efa nivahiny tany Japana mba hametraka lahatsoratra anaty bilaogy momba ny traikefany. Raha manana fanontaniana momba ny fivahinianana any Japana ianao, aza misalasala ihany koa mifandray amin'ny Accessible Japan.